Naya Bikalpa | ...... Morning Walk...... - Naya Bikalpa ...... Morning Walk...... - Naya Bikalpa
…… Morning Walk……
प्रकाशित मिती: २०७६ असार २३, ०७: ५२: ५९
‘दौडाइ प्रेम’ को
– सन्दिप पाण्डे
शनिबार सबै परिवार लाग्यौ फुपुको घर, फुपुको घर थियो चितवन पटिहानी । फुपुको २ छोरा र एक छोरी थिए जेठी छोरिको नाम रुपा, रुपा अधिकारी ।
रुपा दिदी सग मेरो बेग्लै साइनो थियो । लमजुङ हुदा दिदी र मेरो घर नजिकै थियो । सानै बाट रुपा दिदी र म निकै मिल्थ्यौ । उमेर ले म भन्दा ४ बर्ष जेठी भएपनी हामी सानोमा साथी जसरी नै हुर्कियौ । म ६ कक्षा पढ्दा दिदि १० मा पड्नु हुन्थ्यो । विद्यालय एउटै भएको कारण हामी बिहान बेलुकासगै आउने जाने गथ्र्याै । मलाइ दिदी सग दिन काट्दा छुट्टै आनन्द आउथ्यो, कहि कतै जादा होस या केही मीठो कुरा खादा दिदिले मलाइनै खोज्नु हुन्थ्यो ।
दिदिकोमा केही मीठो खाना पाके मैले नखाइ दिदिको मुख मा पर्दैन थियो, दिदिले सदै मलाइ मुसि भनेरै बोलाउनु हुन्थ्यो । मलाइ घाँस काट्न भनेपछि मरेजस्तो लाग्थ्यो तर जब म बार्दली मा बसिरहदा दिदिलाई डोको लिगेर खेतबारि तर्फ जाँदै गरेको देख्थे म पनि कुद्दै जान्थे दिदी सगै । दिदिले सानो भन्दा सानो कुरा सुनाउनु हुन्थ्यो ।
दिदिको स्वर गज्जबको थियो, जब म दिदी लाइ भेट्थे सुरुमै दिदिलाइ गित गाउन लगाउथे । दिन मा ५–६ घन्टा हामी सगै हुन्थ्यौ, बिदाको दिन मा त बिहान देखि बेलुकी सम्म सगै बस्थौ, धेरै जसो म दिदी सगै सुत्ने गर्थे । नातामा दिदी बहिनी भएपनी हाम्रो सम्बन्ध धेरै फरक थियो ।
गाउमा सबैले यी दुई जनाको एउटै केटा सग बिहे गर्दिनु पर्छ भन्थे, दिदिले कुनै प्रतिक्रिया दिनु हुन्न थियो तर मलाइ चाहिँ खुसी लाग्थ्यो र भन्थे म त दिदी जहाँ जानु हुन्छ जो सग जानू हुन्छ उसै सग जानेहो । दिदिले सबै कुरा बताउनु हुन्थ्यो, एस्तैमा एक दिन दिदिले मलाइ कक्षामा एक केटाले प्रेम प्रस्ताव राखेको बताउनु भयो त्यो केटालाई मैले पनि राम्रो सग चिन्दथे ।
दिदिले उसले प्रेम पत्र दिएको छ जुन मैले पडेको छैन भन्नू भो । मैले दिदिलाइ आज बेलुकी म हजुरकोमा सुत्न आउछु अनि मै पड्छु भने । मलाइ बेलुकी दिदिको प्रेम पत्र पड्छु भनेर छुट्टै मजा लाग्यो, बेलुका दिदी को मै सुत्न भनेर गए सुत्ने बेलामा मैले चिट्ठी पडे । मैले चिट्ठी पडिरहदा दिदी लाजले भुतुक्कै हुनु भएको थियो, चिट्ठी पडेर सकेपछि दिदिलाइ सोधे के गर्नु हुन्छ दिदि ? दिदिले खोइ मलाइ त के भनौ के भनौ भो तै भन न के गरुम म ? मैले प्रकाश लाई सम्झिए, मोटो शरीर, बिच बाट सिउदो काटेर टाउको भरी तोरिको तेल लगाएर कपाल कोर्छ, पहिले पनि पल्लो गाउकी सिमा सग चक्कर चलेको थियो भनेर हल्ला सुनेको थिए ।
एता मेरि रुपा दिदी नाम मात्रको होइन साच्चै नै रुपकी रुपा हुनुहुन्थ्यो तेहि माथी कति मीठो स्वर । मैले नै दिदी लाई त्यो त हुदैन हजुर सग जोडि पनि मिल्दैन भनेर सम्झाए र अब आइन्दा कसैले एस्तो गरेमा मलाइ भन्नू म पास गर्छु अनि बल्ल हजुर ले दयथाचष्भलम बनाउनु बहने दिदी हस्दै हुन्छ मुसि भन्नू भो । दिदिले पनि भोलिपल्ट चिट्ठी फिर्ता दिएर अब आइन्दा एस्तो काम नगर नत्र सर लाई भन्दिन्छु भन्नू भएछ ।
मैले बेला बेलामा प्रकाश् मेरो भिनाजु होत दिदी भन्दै जिस्काउथे । एक दिन तेस्तै कुरामा मैले दिदी लाई जिस्काउदै भनेको थिए दिदी तपाइले जसलाइ माया गर्नु हुन्छ त्यो केटालाइ मैले उडाइदिन्छु । दिदिले हस्दै सोध्नुभयो किन ? मैले जबाफमा भने हजुर एति सुन्दर हुनुहुन्छ अनि हजुर ले साच्चै प्रेम गर्ने झन कति राम्रो होला त्यै भएर । मेरो जबाफ पछि दिदिले भन्नु भयो मेरो सौता हुन्छेस त ? मैले हास्दै भने हुन्छु तर तपाइले बनाए ।
दिदिको अघिपछि फुपाजुको सरुवा भयो र सबै जना चितवन जाने भए, दिदी जाने भन्ने सुनेको दिन देखि म राम्रो सग खाना पनि खान्न थे । दिदि चितवन जाने दिन म खुब रोए, म एक्लि भएकी थिए । दिदी लाई म खुब सम्झन्थे, सगै घाँस काट्न गएको, सगै मेला हेर्न गएको, सगौ गोट्टा खेलेको, कतै बिहे पुजा हुदा दिदी बहिनी खुब नाच्थ्यौ ।
सायदै कुनै कुरा हुदोहो जसमा म उहालाइ नसम्जिदी हु । कोहि डोको लिगेर हिड्दा उहालाइ सम्झिन्थे, घर मा केही मीठो खाना पाक्दा दिदिको याद आउथ्यो, म याद गर्न सक्ने हुदाको दिनदेखिबाट म दिदी सगै थिए अब एक्कासि टाढा हुदा निकै चोट पर्दो रहेछ । मेरो शरीरको कुनै अंग काटिएको जस्तो लाग्यो मलाइ त्यो दिन ।
हरियाली जङ्गल मा अचानक लागेको ढडेलो थियो मेरो लागि त्यो पल, र मन मा पिर यो पनि थियो कि अब मेरा उजाड जीवन फेरि हरियाली हुने छौन । २ बर्ष सम्म त दिदी हरु दशै मनाउन उतै पहाड आउनु हुन्थ्यो । ६–७ दिन बस्दा हामी बर्ष भरिका हाम्रा कुरा सुनाउथौ तर २ बर्ष देखि हाम्रो कुरा हुन पाएको थिएन । त्यो दिन म खुसी भएर दिदिको घर गए, दिदिलाइ देख्ने बित्तिकै पुरना याद हरु ताजा भए । देख्ने बित्तिकै अगाल्न पुगे, मेरा आँखा रसाएका थिए,दिदी पनि भाबुक हुनु भयो । दिदी २ बर्षमा धेरै बदलिनु भएको थियो, हल्का मोटाउनु भएको रहेछ,रुप कि त उहाँ उसै नै रुपा हुनु हुन्थ्यो ।
मलाइ दिदी सग धेरै गफ गर्नु थियो, दिदिलाइ आज भन्नू थियो हजुरको मुसि कसैलाइ प्रेम गर्छे अनि उसलाइ पनि हजुर जस्तै गित गाउन मन पर्छ, उ पनि हजुरकी मुसिलाइ हजुरले जस्तै प्रेम गर्छ । अनि सबै भन्दा महत््वपूर्ण उ पनि मलाइ हजुरले जस्तै मुसि भन्छ । मलाइ रबिन ले मुसि भन्दा दिदिको खुब याद आउथ्यो तर भनेकी थिइन ।
मैले यी सबै कुरा भन्छु भनेर सोच्दै थिए दिदिले मलाइ मुसि हिन मेरो कोठामा तलाइ आज कगचउचष्कभ दिन्छु भन्नू भो । म दिदिको पछि पछि दिदिको कोठामा गए, दिदिले कोठामा पुग्ने बित्तिकै ढोका लगाउनु भयो र भन्नु भयो आँखा बन्द गर तलाइ एक कुरा देखाउछु । मैले आँखा बन्द गरे मन मा खुल्दुली चल्दै थियो के होला तेस्तो कुरा, मैले आँखा बन्द गरिरहदा दिदिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले यो कुरा तलाइ नै भेटेर भन्छु भनेर बसेकी थे आज सम्म कसैलाइ पनि थाहा छैन ।
मन झन रोमान्चित भयो म दिदिको कगचउचष्कभ को लागि एकदमै उत्सुक थिए दिदिले भन्नू भो ल मुसि आँखा खोल । मैले आँखा खोल्दा मेरा अगाडि एक तस्बिर थियो जुन हातले बनाइएको थियो जसको तल पट्टी लेखिएको थियो my first love र त्यो तस्बिरको मान्छे उहीँ थियो “रबिन” ।
म एक्कासि रुन पुगे दिदिले मेरो अबस्था देखेर अचम्ममा पर्नु भयो, दिदिले केहि भन्न नपाउदै उहालाइ अंगालो मारे र आफैले भने । मलाइ थाहा थिएन आज पनि हजुर आफ्नो जिवन को महत्त्वपूर्ण कुरा अरुलाइ भन्दा पहिले मलाइ भन्नू हुदो रहेछ म त हजुर ले मलाइ बिर्सनु भयो भनेकी थे, त्यही भएर आँसु आयो ।
मैले भनेपछि दिदिले मलाइ आफ्नो दुबै हातले समाउदै भन्नुभयो थत मुसि त मेरो प्राण होस तलाइ म भुलौला र ? दिदिले त्यो भनेपछी आँसु पुछेर दिदिको अंगालो बाट छुट्दै तस्बिर देखाउदै भने अनि उ नि ? दिदी हल्का सग मुस्कुराउदै भन्नू भयो, उ चाहिँ तेरो दिदिको सास । म केही बोलिन, दिदिले सुनाउदै जानुभयो उहाले रबिन लाई औधी माया गर्नु हुदो रहेछ । चितवन आएपछि दिदिले चित्र बनाउन सिक्नु भएछ, दिदिले मलाइ टाउकोमा हल्का सग हान्दै भन्नू भयो तैले भुलिस भनेकी होइन ल हेर मैले चित्र बनाउन सिकेर पहिलो तस्बिर कस्को बनाएको छु ।
दिदिले देखाउनु भयो मेरो ५ कक्षा पड्दा को फोटो । आकाशी रंगको सर्ट अनि निलो फरक मा दुइचुल्ठी गरि बादेको कपाल । मलाइ आज पनि याद छ बिधालय जाने बेलामा सदै मलाई रुपा दिदिले कपाल कोर्दिनु हुन्थ्यो र भन्नू हुन्थ्यो ल मेरि मुसि पुतली जस्तै भइस । त्यो तस्बिर देख्दै आखामा आँसु आयो र दिदिलाइ अंगालो मार्दै यिखभ थयग दिदी भने। दिदिले पनि love you मुसि भन्नुभयो । दिदिले भन्दै जानू भयो उहाँ रबिन लाई कति प्रेम गर्नु हुन्छ । उसको यादमा गाएका गितदेखि बनाएका तस्बिर सबै देखाउनु भयो ।
दिदिले रबिनका बारेमा कुरा गरि रहदा मैले दिदिको मुहारमा भएको खुसी देख्न सक्थे, दिदिको प्रेम कति चोखो छ उहाँ रबिन प्रती म भन्दा कयौं गुणा ज्यादा प्रेम गर्नु हुन्थ्यो । दिदिले मलाइ त्यो दिन उहीँ बस्न भन्नुभयो तर मैले भोलि कलेज पुग्नै पर्छ अर्को हप्ता बस्ने गरि आउछु भनेर फर्किए । त्यो दिन घर आउदा धेरै कुरा सोचे, प्रेम त म पनि गर्थे रबिन लाई तर दिदिको प्रेम पनि त चोखो छ । मैले दाजे धेरै कुरामा तर कुनै पनि कुरामा म दिदिको प्रेमको अगाडी फिक्का थिए ।
एकातिर मेरो आफ्नो सपना थियो आर्को तिर मेरि प्यारी दिदिको प्रेम, त्यो दिन भन्दा अगाडि हरेक पल्ट रबनको बारेमा सोच्दा म रबिनको लागि हर कुरामा मिल्ने जस्तो लाग्थ्यो तर तेस दिन मैले रबिन सग हर कुरामा असमान्ता भेटे । हाम्रो उमेर, सोचाइ, रुची कुनै कुरामा पनि म रबिन सग मिल्ने देखिन तर हर कुराको लागि रुपा दिदी अब्बल हुनुहुन्थ्यो । मेरो त प्रेमका टुसा उम्रीन लागेको थियो तर रुपा दिदिको प्रेम को फुल फुलिसकेको थियो अब म कसरी मेरो यो भबिस्य निश्चित नभएका प्रेमको पालुवा पलाउन फक्रिएको फुललाई बुर्झाइदिउ ? म हर कुराले आफुलाइ रुपा दिदिको काडो सम्झिन लागे ।
जसले मलाई हमेसा खुशी दियो उसको जिवनमा बिझाउनु उचित नहुने भन्दै म रबिन देखि टाढा भए र अब आइन्दा कुरा नगर्ने प्रण गरे । आज पनि रबिन mयचलष्लन धबपि आउदा म उसलाई निहालेर हेर्छु एक मन त भन्छ जा सदिच्छा भुलिदे सारा कुरा तर आर्को मन सम्झन्छ त्यो दिदिको चोखो प्रेम मेरा र रबिनका लागि उहाले गर्ने अनि रोक्छु आफ्नो पाइला अनि झुकाउछु मेरा नजर ।
उ भनी रहदा उसको आसु बगेर गाला मुनि ओठ सम्म आएको थियो ।
नजिकै रहेको न्यापकिन निकालेर उसलाइ दिए, आँसु पुछेपछी मैले केही भन्नू भन्दा पहिलेनै उसैले मलाइ हतार हुन्छ म निस्कन्छु भनी मैले हुन्छ म केहिबेर पछि निस्किन्छु भने, उठेर जाने बेलामा २ कदम चाली सकेकी थिइ पछाडि फर्किदै भनी “प्रेम प्राप्तीमा मात्र हुन्छ भन्ने हुदैन कहिलेकाही प्रेमका लागि त्याग्नु पनि जरुरी हुन्छ”, त्यो कुरा मेरो जिवनमा मात्र होइन हजुर को जिवनमा पनि लागू हुन्छ । म अचम्म परे र भने मत्लब ? उसले हल्का मुस्कुराउदै भनी आफ्नो जीवन लाई प्रेम गर्नु हुन्छ भने हात को त्यो जहर त्यागनुस् ।
२०७६ असार २३, ०७: ५२: ५९
नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दलाइ स्वागत गर्दै आगामी राजनीतिक यात्राकाेलागि शुभकामना ब्यक्त गरेका छन्...
नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- अमेरिकाले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आईडब्ल्यूओसी) पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । तेजाब...